I-Raj's Cozy efikelelekayo eMzantsi@ Intliziyo yaseKolkata! - I-Airbnb
I-Raj's Cozy efikelelekayo eMzantsi@ Intliziyo yaseKolkata!
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguMehul
Indawo isembindini weKolkata kwindawo yaseGariahat/Ekdalia. Njengoko igama libonisa ukuba indawo yokuhlala ipholile, ivulekile kwaye icocekile. Yiflethi enamagumbi amathathu okulala enendawo yokuhlala kunye nekhitshi. Amagumbi axhotyiswe ngokupheleleyo ngezinto ezisisiseko kwaye anegumbi lokuhlambela le-en-suite. Indawo yokuhlala ineendawo zokuhlala ezikhululekileyo apho unokukhululeka kwaye uphumle. Ikwanayo nekhitshi nendawo yokutyela. Indawo entle kakhulu kubahambi bodwa, izibini, iintsapho.
Ucoceko lwenziwa phambi kwetshekhi nganye
Le yindlu enkulu enamagumbi amathathu unyana wam ebekade ehlala kuyo. Kodwa njengoko ebeye phesheya eyofunda kwaye lendlu ayihlali mntu, sagqiba kwelokuba siqeshise amagumbi ashiyekileyo. Igumbi yinkosi yokulala enegumbi lokuhlambela elincanyathiselwe kunye nendawo yokugcina eyaneleyo. Kukho elinye igumbi lokulala eliphindwe kabini, elikwa-Airbnb, ngoko uhlala udibana nezinye iindwendwe endlwini. Okanye wena kunye nabahlobo bakho unokucwangcisa ukuhlala ngokudibeneyo kwaye ufumane ukufikelela kuyo yonke ipropati.
Indawo oyibhukhileyo ine:
• Igumbi lokulala eliphambili
• Igumbi lokuhlambela elidityaniswe ne-en-suite enomatshini wokuhlamba kunye nezinye izinto ezisisiseko
• Indawo yokugcina etshixwayo- uyacelwa ukuba ugcine zonke izinto zakho zexabiso zitshixelwe kwigunjana/iwodrophu oyinikiweyo.
• Indawo yokuhlala inendawo yokuhlala eyaneleyo eneTV, enokufikelelwa ziindwendwe.
• Kananjalo inegumbi lokutyela kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo.
Ikhitshi likhulu kwaye linazo zonke izinto ezisisiseko ezifana nesitovu, ifriji, imicrowave, izixhobo njl.njl. Iindwendwe zinokusebenzisa ukwenza isidlo sakusasa esilula okanye ukufudumeza ukutya kwakhona. Sinikezela ngezinto ezimbalwa ezisisiseko zokupheka, kodwa ubukhulu becala lulungiselelo lokuzenzela. Uyacelwa ukuba uhlambe izitya emva kokusetyenziswa.
• Ibhalkhoni -Kuyathandeka ukuma ebhalkhoni kwaye usele ikomityi yeti kwaye wonwabele impepho emnandi equkuqela endlwini.
Igumbi lokuhlala elitofotofo kakhulu libonelela ngendawo egqibeleleyo yokuphumla kunye nencwadi yakho okanye uhlele umsebenzi onzima weofisi ngelixa ungekho eofisini.
• Andihlali apha; kodwa xa ufuna naluphi na uncedo ungasoloko undifowunela.
• Igumbi lakho licocwa qho emva kweeveki ezimbini, uyacelwa ukuba ushiye ucango luvuliwe ukuze uncedo lwasekhaya lungakuphazamisi xa ungaphakathi. Izindlu zangasese zicocwa kanye ngeveki. Ibrashi, kunye nesicoci sendlu yangasese zigcinwa kumagumbi okuhlambela ukuba unqwenela ukucoca.
• Iflethi inoqhagamshelo olululo lwe-Wi-Fi.
• Amashiti neelinen zokulala zitshintshwa kanye ngeveki naphambi kokungena.
• Iitawuli zomisiwe kwaye zinikezelwe kuwe ngosuku olulandelayo. Uyacelwa ukuba usebenzise iitawuli kwakhona kangangoko unako.
Indawo-Ikufuphi nayo yonke into
Edume kakhulu, imakethi yendawo -IMarike yaseGariahat yi-950 mts nje (imizuzu eyi-6) ukusuka kwindawo. IMarike yaseDakshinapan yi-2.6 kms (14 mins) ukusuka kwindawo.
• I-Southern Avenue yi-3.6 kms (imizuzu eyi-16) ineendawo zokutyela ezininzi kunye neeCafé's ezifana neCrave Food Works, i-Wise Owl, i-What's this Friday etc. Ukonwabele ukutya kwase-Thai? Zama ukuhanjiswa kwekhaya ngeHong Kong Express.
• I-Quest Mall, enazo zonke iimpawu eziphambili, iindawo zokutyela, i-multiplex, ikumgama oziikhilomitha eziyi-2.5 (imizuzu eli-17) ukusuka kule ndawo.
• Enye yezona tempile zintle iBirla Mandir imalunga ne-1.3 kms, ethatha malunga nemizuzu eli-10.
• I-Park Street yimizuzu engama-25 yokuqhuba, enezona ndawo zokutyela zibalaseleyo edolophini. Nazi iindawo zokutyela ezintle:
• IBar-B-Q yamaNdiya namaTshayina.
• Peter Cat
• Umlilo kunye ne-Ice ngokutya okugqwesileyo kwe-Italian.
Ufikelelo olulula kuzo zonke iindlela zothutho:
• Ukuma kweeteksi - 5 Min okanye ngaphantsi
• I-Auto Stand - 5 Min okanye ngaphantsi
• Isikhululo seebhasi e-Ekdalia - imizuzu emi-5, indawo yokumisa iibhasi eGariahat: imizuzu eli-10
• Uloliwe wasekuhlaleni - i-Ballyguange Jn- 10 Min
• Isikhululo seMetro esikufutshane- Rabindra Sadan - 10 Min
• Iiteksi zikanomathotholo (UBER/OLA) zifumaneka phantse 24/7
Udluliselo lwesikhululo seenqwelomoya lunokulungiselelwa ngeendleko ezongezelelweyo. Nangona kunjalo, sincoma ukuthatha iteksi ehlawulwa ngaphambili, ekufuneka ixabisa malunga ne-Rs. 450 Malunga.
Ezi zizikhokelo eziya kwipropati .
Emva kokuthatha i-EM Byepass, jikela ngasekunene kwi-Broad Street, uqhubeke umgama oyi-1 km. Uya kudlula nge-UCO bank ngasekhohlo kwakho.
Jikela ngasekhohlo kwiAshitosh Chowdhary Avenue/Gariahat Road.
Emva kweemitha ezingama-300 jikela ngasekhohlo ungene eMandeville Gardens. Emva kweemitha ezili-140 jikela ekunene ukuze uqhubeke kwiGadi yaseMandeville.
Emva kweemitha ezingama-400 jikela ngasekunene kwindlela i-Ekdalia.
Kwiimitha ezingama-80 uya kufumana ipropati 5, Ekdalia Road. Uya kufumana iDomino's ezantsi kwesakhiwo.
4.81 · Izimvo eziyi-63
IGariahat yindawo yentengiso ekhulayo yenginginya yabantu balapha mihla le. Kukho iindawo zokutyela ezininzi ezilungele incasa yakho. Imisebenzi yezandla evela kwilizwe lonke inokufumaneka kwiMarike yaseDakshinapan, ekufutshane kakhulu kule ndawo.
-Bar-B-Q yamaNdiya namaTshayina.
-Umlilo kunye ne-Ice kokona kutya kwe-Italian.
Phantse zonke iindawo zabakhenkethi ezifana neVictoria Memorial, iSt.
Umbuki zindwendwe ngu- Mehul
Ndinika iindwendwe zam indawo kodwa ndihlala ndifowuna kude.